ဘယ်နိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုအနေအထိုင်တွေ မလုပ်ရဘူးလဲ
XiaomiMi7မော်ဒယ်သစ်ဖုန်းက ဘာတွေ ထူးခြားမှာလဲ
Couple ထက်စာရင် Single ပဲ ကောင်းတယ်
“ဆုံမှတ် ဆုံရပ် တနေရာမှာ ဆုံနိုင်မှ”
ခရီးသွားခြင်းကြောင့် ရလာနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူး ၅ ခု
သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်နီလာဝင်းကို ကိုယ်တိုင်သတ်ခဲ့ကြောင်း ဖခင်ဖြစ်သူဝန်ခံ
ချယ်လ်ဆီး တိုက်စစ်မှူး ဂီးရောက် ဘယ်လို ကစားတတ်သလဲ
ရုပ်ရှင်မင်းသား Justin Theroux နဲ့ မင်းသမီး Jennifer Aniston တို့ လမ်းခွဲလိုက်ကြပြီလား
တီးတိန်က မြွေတောင်ဒေသ တရားမဝင် သတ္တုတူးဖော်မှု ထိန်းချုပ်ရေး ဒေသခံများ တောင်းဆို
ဗိုက်ပူခြင်းကို ပျောက်ကင်း သက်သာစေမယ့် လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း ၇ ခု
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စစ်ခေါင်းဆောင်နှင့် စကားပြောခြင်း
တရုတ် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်နှင့် တရုတ်ရိုးရာ ခင်္သြေ့အက
ရန်ကုန် စည်ပင် ဥပဒေကြမ်းကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲသူများ စိတ်ပျက်
ငါးသယံဇာတပေါများရေး ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်း ငါးမဖမ်းရဇုန်များ သတ်မှတ်ရန် စီစဉ်
အဝေးပြေးလမ်း စီမံကိန်းကြီးများကြောင့် ဂေဟစနစ်ပျက်ယွင်းမည့် အန္တရာယ်ရှိ
ရွှေပြည်သာ အရက်ချက်စက်ရုံများ ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှု တိုင်စာပို့မည်
တိုက်ပွဲကြောင့် ပူတာအိုဒေသ ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်မှု လွှတ်တော်သို့ မေးခွန်းထုတ်မည်
သရုပ်ဆောင် လမင်းကဗျာရဲ့ အနုပညာ ခြေလှမ်းသစ် “ဝီစကီ” သီချင်းခွေ
By ချစ်ဖေ (တောင်တွင်းမြေ) 18 February 2018
“ရောမရောက်ရင် ရောမလိုကျင့်” ဆိုတဲ့ စကားပုံကို ကြားဖူးမှာပေါ့။ ကိုယ့်အိမ်၊ ကိုယ့်မြို့၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်လို နေထိုင်တဲ့ဓလေ့ပဲ ရှိပါစေ တိုင်းတပါးကို ရောက်ရင်တော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ထဲမှာ ခရီးသွားလာလည်ပတ်မှုတွေ မြင့်တက်လာပြီး ပြည်ပကို အလည်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်နဲ့ ဖြစ်စေရောက်ခဲ့ရင် အခုပြောမယ့် အနေအထိုင် ပုံစံမျိုးတွေကို မလုပ်ပါနဲ့။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ နည်းနည်း ဖတ် ထားရအောင်ပါ။
(၁) ဂျပန်ကိုရောက်ခဲ့ရင် Tip Money ဆိုတဲ့ အပိုဆုကြေးမပေးပါနဲ့။ သေချာတာက ဂျပန်ကို ရောက်ဖြစ်ချိန်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်တွေမှာ နေဖြစ်၊ စားဖြစ်မယ်။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ ဒီလို အပိုဆုကြေးပေးတာ အပြစ် မဟုတ်ပေမယ့် ဂျပန်မှာတော့ အဆင့်နှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းလို့ မြင်ကြပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ဂျပန်ကို ရောက်ဖြစ်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ အပိုဆုကြေးမပေးပါနဲ့။
(၂) ရုရှကိုရောက်ရင် လူစိမ်းတွေကို ရယ်မပြပါနဲ့။ တကယ်တော့ ဖော်ရွေမှုအနေနဲ့ ရယ်ပြခြင်း ဖြစ်ပေမယ့် ရုရှတွေက အကြံအစည်တခုခုရှိလို့ မျက်နှာချိုသွေးခြင်းလိုမျိုး မြင်ပါတယ်တဲ့။ ရုရှရောက်ရင် သိပ်ပြီး ဖော်ရွေနေတာ မကောင်းပါဘူး။
(၃) အိန္ဒိယရောက်ရင် ဘယ်လက် အသုံးပြုမှုလျော့ပါ။ အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့အရ ဘယ်လက်ဟာ မသန့်ဘူးလို့ ယူဆထားကြပါတယ်။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်စေ၊ ငွေပေးငွေယူမှာပဲဖြစ်စေ၊ ပစ္စည်း အပေးအယူမှာပဲ ဖြစ်စေ၊ ညာဘက်ကိုပဲ သုံးပါ။
(၄) တရုတ်မှာ တခုခုစားဖြစ်ရင် ပန်းကန်ထဲရှိသမျှ အကုန်မစားပါနဲ့။ ဒါဟာ သင့်ကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးသူက ဝအောင် မကျွေးလို့ အကုန်စားလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောလို့ ယူဆကြပါတယ်။ နည်းနည်းလေးတော့ ပန်းကန်စောင့် ချန်ထားလိုက်ပါ။ သူတို့လည်း ကျေနပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
(၅) နော်ဝေရောက်ရင် ကားဟွန်းမတီးပါနဲ့။ သူ့နိုင်ငံရဲ့ အကျင့်အရ ကားဟွန်းကို အရေးပေါ် အနေအထားမှာပဲ တီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တခြား ကားသမားတွေ လန့်သွားပါလိမ့်မယ်။ အရေးပေါ် အနေအထား မလိုအပ်ဘဲ လုံးဝ ဟွန်းမတီးပါနဲ့။
(၆) ပြင်သစ်ကတော့ ရုရှနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဗျ။ ပြင်သစ်ရောက်ရင် Hello (မင်္ဂလာပါ)လို့ ပြောဖို့ လုံးဝမမေ့ပါနဲ့။ ပြင်သစ်လိုတော့ Bonjour madame, Monsieur ဆိုတဲ့ မင်္ဂလာပုံစံ စကားနဲ့ပဲ အမြဲနှုတ်ဆက် စကားစပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ သင်က အဖက်မတန်သလို ဆက်ဆံတယ်လို့ ယူဆခံရပါလိမ့်မယ်။
(၇) ဂျာမနီမှာ စကားပြောနေချိန် ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ လက်မထည့်(နှိုက်)ထားပါနဲ့။ ဒါဟာ ဂျာမနီတွေအမြင်မှာ ယဉ်ကျေးမှု မရှိခြင်းပါပဲ။ စားသောက်နေရင်း စကားပြောနေတာ ဆိုရင်လည်း လက်ကို စားပွဲပေါ်မှာပဲ တင်ထားပါ။ ပေါင်ပေါ်မှာ သွားတင်ထားတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
(၈) အိုင်ယာလန်မှာ ထိုင်ခုံနေရာသာ အားနေမယ်ဆိုရင် ကားနောက်ဖက်ခန်းထဲ ဘယ်တော့မှ သွားမထိုင်ပါနဲ့။ အိုင်ယာလန် အပါအဝင် သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ စကော့တလန်တွေမှာ ကားအခန်းဖွ့ဲထားတာချင်း တူပေမယ့် သာတူညီမျှမှုကို ပိုပြီး အလေးထားကြပါတယ်။ ရှေ့ခန်းမှာ နေရာရရင် ရှေ့ခန်းမှာပဲ ထိုင်လိုက်ပါ။ ဒါဟာ ယဉ်ကျေးမှုကို ပြသခြင်း တခုပါပဲ။
(၉) တောင်အမေရိကတိုက်ကို ရောက်နေချိန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို အမေရိကလို့ အလွယ်မခေါ်ပါနဲ့။ တောင်အမေရိကတိုက်ကလည်း အမေရိကပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်ကို သိပ်သဘောကျကြလို့ ရောနှော ခေါ်ဆိုမှုအဖြစ် မှတ်ယူမနှစ်သက်ကြပါဘူး။
(၁၀) အိန္ဒိယမှာ လက်ဆောင်တခုခု ရခဲ့ရင် ချက်ချင်းဖွင့်မကြည့်ပါနဲ့။ အမေရိကန်လို နေရာမှာဆိုရင်တော့ သင့်ကို ဘာပေးသလဲ ချက်ချင်း ကြည့်စေချင်မှာ မှန်ပေမယ့် အိန္ဒိယမှာတော့ ဘာများလဲလို့ ဆိုတဲ့ ဆန္ဒကို ခဏ ထိန်းထားပါ။ လောသကြီးသူ တယောက်အနေနဲ့ ထင်မြင်ခံရပါလိမ့်မယ်။
(၁၁) နယ်ဟာလန်ကို ရောက်ခဲ့ရင် What do you do? (မင်းဘာလုပ်နေလဲ)ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မမေးပါနဲ့။ သူတို့ဆီက ပြောဆိုဆက်ဆံမှု အကျင့်အရ အခုလို စပ်စုသလို မေးမြန်းခြင်းကို သဘောမကျဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ လူကြီးလူကောင်းမဆန်ဘူးလို့ ထင်မြင်ခံရတတ်ပါတယ်။
(၁၂) ပြင်သစ်ကို ရောက်ခဲ့ရင် လူကြားထဲ နှာမချေမိပါစေနဲ့။ နှာချေခြင်းကို ရွံစရာအဖြစ် ပြင်သစ်တွေက ယူဆကြပါတယ်။ ပြောဆိုဆက်ဆံနေရာကနေ ခွင့်တောင်းပြီး အဆင်ပြေမယ့် နေရာမှာ နှာသွားချေလိုက်ပါ။ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ တူရကီတွေမှာလည်း ဒီလိုပဲ လူကြားထဲ နှာချေတာကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး။
www.rd.com တွင်ဖော်ပြထားတဲ့ Rude! 12 things you should never do in other countries ဆောင်းပါးကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
Topics: နိုင်ငံ, ပြင်သစ်, အနေအထိုင်